Myanmar – Bago University
Facts About Bago University
B.A. / B.A. (Hons) in Myanmar
M.A. in Myanmar
B.A. in Myanmar
B.A. (Honours) in Myanmar
မ-၁၀၀၁၊ မ-၁၀၀၂ (မြန်မာစာ)
မ-၁၀၀၁ တွင် စကားပြေ၊ ကဗျာရွေးချယ်ချက်များ၊ နီတိအဆုံးအမကဗျာများ၊ မြန်မာသဒ္ဒါ၊ လုပ်ငန်းသုံးမြန်မာစာများပါဝင်သည်။ မ-၁၀၀၂ တွင် စကားပြေ၊ ကဗျာရွေးချယ်ချက်များ၊ မြန်မာစာ မြန်မာ့စကားနှင့် မြန်မာအဘိဓာန်၊ အနှစ်ချုပ်၊ စာစီစာကုံး စသည်များကို လေ့လာကြရမည်။ ထိုအခါ စကားပြေသဘောတရား၊ စကားပြေအတတ်ပညာများနှင့် ကဗျာပါအကြောင်းအရာ၊ ကဗျာ့အရေးအဖွဲ့၊ အဆင်တန်ဆာ၊ ရသတို့ကို လေ့လာသိရှိကြရမည်။ စကားပြေ၊ ကဗျာတို့မှ သိမှတ်ဖွယ်ရာများကိုလည်းကောင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မြန်မာစာအရေးအသားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာမှုနယ်ပယ်တွင်အရေးပါသည့် ဆုံးမစာတို့ကိုလည်း လေ့လာသင်ယူကြရမည်။
မ-၁၁၀၁(စာပေယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများ၊ မေတ္တာစာ၊ ဘာသာဆောင်းပါးများ)
မ-၁၁၀၁ စာပေယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများတွင် ဇေယျဆောင်းပါးများ၊ သိပ္ပံမောင်ဝ၏ဆောင်းပါးများနှင့် မေတ္တာစာတွင်	ကြည့်ကန်ရှင်ကြီးမေတ္တာစာများကို	လေ့လာသင်ယူကြရမည်။	ဆရာဇေယျ၏ စာပေဆောင်းပါးများတွင်ကျေးလက်သဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုး၍	စာပေချစ်စိတ်၊ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် တွေးခေါ်ရေးသားနိုင်စွမ်းရှိပုံကို လေ့လာနိုင်မည်။ သိပ္ပံမောင်ဝ၏ဆောင်းပါး များတွင် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော ပုံပြင်၊ ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ်များကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိမြင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကြည့်ကန်ရှင်ကြီးမေတ္တာစာများ၏ သဘောသဘာဝနှင့် အကြောင်းအရာရေးဖွဲ့ပုံတို့ကို ပို့ချပေးပါမည်။
မ-၁၁၀၂(အချင်းကဗျာစု၊ အချိုးကဗျာ၊ ရကန်)
မ-၁၁၀၂ အချင်းကဗျာစုတွင် ကာချင်း၊ တျာချင်း၊ အိုင်ချင်း၊ အဲချင်း၊ ဒုံးချင်း၊ ညည်းချင်း၊ လွမ်းချင်း၊ ဟန်ချင်းဟူသော အချင်းကဗျာ ရှစ်မျိုး ပါဝင်သည်။ အချင်းကဗျာစုတွင် မြန်မာကဗျာလောက၌ အထင်အရှားရှိနေသော	အချင်းကဗျာအမျိုးအစားများ၏	သဘောသဘာဝ၊ အချင်းကဗျာတို့၏ အလှနှင့် ရသတို့အပြင် အကြောင်းအရာ၊ အရေးအဖွဲ့တို့ကိုပါ လေ့လာသိရှိစေရန် သင်ယူကြရမည်။ အချိုးကဗျာစုတွင် ဒွေးချိုး၊ တြိချိုး၊ လေးချိုးစသော အချိုးကဗျာများ၏ သဘောသဘာဝများ၊ အကြောင်းအရာနှင့် ရေးဖွဲ့တင်ပြပုံတို့ကို ခွဲခြားပို့ချပါမည်။ သံဝရပျို့သည် အင်းဝခေတ် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ ပျို့တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ ပျို့သဘောသဘာဝနှင့် လူမှုကျင့်ဝတ်အဖွဲ့များဖြင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို လေ့လာသင်ယူကြရပါမည်။ ဗဟုသုတ ဖတ်စာအနေဖြင့် ဟံသာဝတီဆုံးမစာမှ စာသင်သားတို့လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်သည့် အဆုံးအမများကို ဗဟုသုတရစေရန် သင်ယူပေးပါမည်။
မ-၁၁၀၃ (ဘာသာဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်)
ဘာသာဆောင်းပါး (၁၀) ပုဒ်ကို လေ့လာကြရမည်။ ထိုမှ မြန်မာဘာသာစကားဆိုင်ရာ သိမှတ် ဖွယ်ရာများနှင့်	ဘာသာပြန်တွင် ဘာသာပြန်အတတ်၏ သဘောတရားနည်းနာများ၊ ဘာသာပြန် ဟောပြောချက်များကို သင်ယူကြရမည်။ ထိုဆောင်းပါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာစကားအကြောင်း၊ ဘာသာစကားသဘာဝများ၊ ပညာရှင်များ၏ ဘာသာစကားအယူအဆများ၊ ဘာသာစကားသည် ဆက်သွယ်ရေးကြားခံတစ်ခုအဖြစ် အရေးပါမှုများ စသည်တို့ကို နားလည်သိရှိနိုင်ပေမည်။
မွေ့နွန်းရကန်သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်စာဆို ရွှေနန္ဒသူ၏ ရကန်တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ ရကန်သဘော သဘာဝ၊ အကန်အကျောက်၊ လူ့သဘာဝအဖွဲ့များကို ခံစားမှုရသအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ခြယ်မှုန်း ထားသည်ကိုလေ့လာကြရမည်။ စာပေလောကတွင် ရှေးစာဆိုကြီးများ၏ စာပေလက်ရာများကို ဆရာဇော်ဂျီ၏အတွေးအမြင်များနှင့် ဖန်တီးထားသောဆောင်းပါးများပါသည်။ ဆောင်းပါး (၁၁) ပုဒ်ပါဝင်ပြီး မြန်မာစာပေအဆင့်အတန်း၊ စာပေပညာရှင်များ၏ အရေးအဖွဲ့များကို လေ့လာသင်ယူ နိုင်ပါမည်။
မြန်မာ့ရေးရာတွင် စာပေ၊ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေး စသည်တို့ပါဝင်သည်။ စာပေအနေဖြင့် ပုဂံခေတ်မှ မျက်မှောက်ခေတ်အထိ မြန်မာစာပေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပုံ၊ ဘာသာစကားကဏ္ဍတွင် လူမျိုးစုဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ဘာသာစကားဖြစ်ထွန်းလာပုံတို့ကို လေ့လာသင်ယူနိုင်မည်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အပိုင်းတွင်အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်၊ အစားအသောက်များအကြောင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာကစားနည်းများ အကြောင်း၊	မြန်မာ့အထင်ကရဒေသများအကြောင်း၊မြန်မာ့ရိုးရာပွဲတော်များ အကြောင်းများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းရန်၊ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်မီစေရန် ရည်ရွယ်၍သင်ကြား ပါသည်။
မ-၁၀၀၄ ၊ မ-၁၀၀၇ (မြန်မာစကားပုံနှင့်ဆိုရိုးစကားများ) (၁) (၂)
မ-၁၀၀၄ နှင့် မ-၁၀၀၇ တို့တွင် မြန်မာစကားပုံနှင့် ဆိုရိုးစကားများ (၁) နှင့် (၂) တို့ပါဝင်သည်။ မြန်မာစကားပုံနှင့်ဆိုရိုးစကားများအကြောင်းကို အခန်းကဏ္ဍများခွဲ၍ဖော်ပြထားသည်။ လူ့အဖွဲ့ အစည်း၌ ရှောင်ရှားသင့်သည့်အချက်များ၊ လိုက်နာရမည့်စံနမူနာပြု မှတ်သားဖွယ်ရာများကို ပေါ်လွင်အောင် စကားပုံ ဆိုရိုးများဖြင့်ကိုးကားပြောဆိုနိုင်ရန်။ ထိုစကားပုံဆိုရိုးစကား များသည် လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွင် ကောင်းရာကိုညွှန်ပြပြီး လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် လမ်းညွှန်ပေးသောစကားများဖြစ်ကြောင်း၊	မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအခန်းကဏ္ဍတွင် မြန်မာစကားပုံနှင့် ဆိုရိုးစကားများ၏ အရေးပါပုံကိုလည်းသိရှိကြစေရန် ရည်ရွယ်သင်ကြားပေးပါသည်။
မ-၂၁၀၁ စကားပြေ ( ရွှေပြည်စိုးဝတ္ထု + စကားပြေရွေးချယ်ချက် )
၂၀ရာစုခေတ်ဦး ဂန္တဝင်ဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ရွှေပြည်စိုးဝတ္ထုကို လေ့လာသိရှိစေရန်၊ မြန်မာစာပေ သမိုင်းတစ်လျှောက်ပေါ်ထွန်းခဲ့သော စကားပြေပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကို လေ့လာမှတ်သား နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။ ရွှေပြည်စိုး၀တ္ထုသည် မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် တလေးတစားတန်ဖိုးထားအပ်သော ၂၀ရာစုခေတ်ဦး ကာလပေါ်၀တ္ထုကောင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရသစာပေ၏ သဘောတရားနှင့် အတတ်ပညာကို သိရှိနားလည်စေရန်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးစွာထိန်းသိမ်းစေလိုသော ဦးလတ်၏စေတနာကို သိရှိစေရန် ဖြစ်သည်။ စကားပြေရွေးချယ်ချက်တွင် မြန်မာစာပေ သမိုင်းတစ်လျှောက် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော စကားပြေများမှ (၁၅)ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ဖော်ပြထားသည်။ ဝတ္ထု၊ ရာဇဝင်၊ ဓမ္မသတ် ဖြတ်ထုံးလျှောက်ထုံး၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိမှတ်တမ်း၊ အဖွင့်စကားပြေဟူ၍ ကဏ္ဍ(၅)မျိုး ခွဲခြားတင်ပြထားပါသည်။ စကားပြေရွေးချယ်ချက်တွင် စကားပြေတစ်ပုဒ်စီ၏အကြောင်းအရာနှင့် အရေးအသားတို့ကိုပါ လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မ-၂၁၀၂ ကဗျာ(ပျို့) (ဉမ္မာဒန္တီပျို့)
ဉမ္မာဒန္တီပျို့သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်စာဆိုဦးရွှန်း၏ ထင်ရှားသောပျို့တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ ဉမ္မာဒန္တီပျို့မှ မှတ်သားလိုက်နာဖွယ်အကြောင်းအရာ၊ အရေးအဖွဲ့စွမ်းရည်များကို သိရှိစေနိုင်ပါသည်။
မ-၂၁၀၃ (ဘာသာဆောင်းပါး၊ စကားပြေအရေးအသား)
ဘာသာဆောင်းပါးဆိုင်ရာ မှတ်သားဖွယ်ရာများကို လေ့လာသိရှိစေရန်၊ မြန်မာဘာသာစကား၊ မြန်မာအက္ခရာ၊ ဗျည်းသရတို့၏ သဘောသဘာဝ၊ မြန်မာဝေါဟာရတို့၏ ရေးထုံးနှင့် အနက်အဓိပ္ပာယ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊ ဘာသာပြန်အတတ်ပညာ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ဘာသာပြန်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများဆိုင်ရာ မှတ်သားဖွယ်ရာများကို သိရှိစေရန် လေ့လာရမည်။
မ-၂၁၀၄ (ပြဇာတ်) တွင် မဟော်ပြဇာတ်နှင့် ခေတ်သစ်ပြဇာတ် ၅ပုဒ်တို့ပါဝင်သည်။ မဟော်ပြဇာတ်တွင် ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်းပိုင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောပြဇာတ်စာပေကို သိရှိစေရန်၊ စာဆိုဦးကြင်ဉ၏ ထူးခြားသောစိတ်ကူးဉာဏ်နှင့် စာပေစွမ်းရည်ကို လေ့လာနိုင်စေရန်၊ မဟော်ပြဇာတ်မှပေးသော ရသနှင့်ဘဝအသိအမြင်ကို သိရှိစေရန်၊ မဟော်ပြဇာတ်၏အာဘော်မှာ မူလဇာတ်တော်၏ အာဘော်အတိုင်း မဟော်သဓာသတို့သား၏ ပညာဂုဏ်နှင့် မိမိပညာဖြင့် အများအကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပုံကို ဖော်ကျူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာပြဇာတ်များမှ ကလေးပြဇာတ်၏ပုံသဏ္ဍာန်၊ ရတုကဗျာအဖွဲ့မှ ပြဇာတ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့ပုံ၊ မိဘကျေးဇူးကိုသိရှိရန်၊ စာရေးဆရာတို့၏ဘဝနှင့် စာပေအပေါ် တန်ဖိုးထားမှုများ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာကို မြတ်နိုးမှုရှိပုံများကို ခေတ်နှင့်ထင်ဟပ်၍ တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်များ တင်ပြထားသည်။ မြန်မာတစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်များသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း မီသော ပြဇာတ်များဖြစ်ကြောင်း သိရှိစေရန်၊ ရှေးပြဇာတ်နှင့် ခေတ်သစ်ပြဇာတ်တို့၏ ပုံသဏ္ဍာန် ကွဲပြားမှုကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
အာသံနိုင်မော်ကွန်းသည် ကုန်းဘောင်ခေတ်စာဆို ဒုတိယနဝဒေး၏ ထင်ရှားသော စစ်နိုင်မော်ကွန်း တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ ထိုမော်ကွန်းမှ မော်ကွန်းအဖွဲ့ခံအကြောင်းအရာများ၊ အရေးအဖွဲ့များကို လေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟုသုတဖတ်စာအဖြစ် ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်၏ မြန်မာစာပေသမိုင်းကို လေ့လာရမည် ဖြစ်သည်။
မ-၂၁၀၆ (ဘာသာစကား၊ ဘာသာပြန်)
ဘာသာစကားအတွက် ဝေါဟာရတ္ထပကာသနီကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၁)ခန်းမှ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန်၊ ဘာသာပြန်အတွက် ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းနှင့် အတတ်ပညာတို့ကို ဘာသာပြန်ဆရာကြီး(၆)ဦး၏ အဆိုအမိန့်များ၊ သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို သိရှိနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
မ-၂၀၀၁ (မြန်မာစာ)တွင် စကားပြေ၊ ကဗျာနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားစကားပုံများ ပါဝင်သည်။ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နှင့် ဇာတိမာန်ထက်သန်ရေးဆိုင်ရာ စကားပြေ၊ ကဗျာများ၊ မြန်မာစာမြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသော စကားပြေ၊ ကဗျာများကို လေ့လာသင်ယူကြရမည်။ မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီး တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအကျိုး သယ်ပိုးလိုစိတ်များ ဖြစ်လာစေရန် သင်ယူကြရမည်။ တိုင်းရင််းသားစကားပုံများမှတစ်ဆင့် တိုင်းရင်းသားအသီးသီး၏ အတွေးအခေါ်၊ ယုံကြည်မှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို လေ့လာသင်ယူကြရမည်။
မ-၂၀၀၂ (မြန်မာစာ)တွင် ဝတ္ထုတို၊ ပြဇာတ်ရွေးချယ်ချက်၊ ကဗျာရွေးချယ်ချက်နှင့် ဘာသာဆောင်းပါး တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့မှ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးစံ၊ မြန်မာ့ရေမြေသဘာဝတို့ကို ဖော်ညွှန်းထားသည်ကို လေ့လာကြရပါမည်။ မြန်မာစာ၊ မြန်မာဘာသာစကား၏ သဘောသဘာဝတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ရန် ဘာသာဆောင်းပါးများကိုလည်း သင်ယူကြရမည်။ ထို့အပြင် မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကာ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ချစ်သည့်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
မ-၂၀၀၄၊ မ-၂၀၀၈ (မြန်မာအမျိုးသမီးစာဆိုများနှင့်၎င်းတို့၏စာများ) (၁) (၂)
မ-၂၀၀၄ နှင့် မ-၂၀၀၈ တို့တွင် မြန်မာအမျိုးသမီးစာဆိုများနှင့်၎င်းတို့၏စာများ (၁) နှင့် (၂) တို့ ပါဝင် သည်။ မြန်မာအမျိုးသမီးစာဆို (၁၅) ဦးတို့၏ ဘဝနှင့်စာပေကိုလေ့လာရမည်။ အမျိုးသမီး စာဆိုများတွင် အင်းဝခေတ်မှ ကုန်းဘောင်ခေတ်အတွင်းပေါ်ထွန်းခဲ့သော မိဖုရားများ၊ နန်းတွင်းသူများ၊ မင်းသမီးများသာမကအရပ်သူစာဆိုများအပြင် သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင် စာဆိုများ ပါဝင်သည်။ မြန်မာအမျိုးသမီးစာဆိုများ၏ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အတွေးအခေါ်၊ ဘဝအတွေ့အကြုံများကို ၎င်းတို့၏ စာများမှ လေ့လာနိုင်ပြီး မြန်မာစာပေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အမျိုးသမီး စာဆိုရှင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း လေ့လာသိရှိနိုင်သည်။
ရှေးဝတ္ထုများဖြစ်သော ပါရာယနဝတ္ထုနှင့် ဝေဿန္တာဇာတ်တော်ကြီးဝတ္ထုတို့ပါဝင်ပါသည်။ ပါရာယနဝတ္ထု သည် မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် အစောဆုံးဟု အသိအမှတ်ပြုကြသော အင်းဝခေတ်ကဗျာစာဆိုကြီး ရှင်မဟာသီလဝံသ၏ စကားပြေကျမ်းကြီးဖြစ်သည်။ ဝေဿန္တာဇာတ်တော်ကြီး (၈) စောင်ကို ရေးသားပြုစုတော်မူသော	ဆရာတော်ဦးဩဘာသ၏ထူးခြားထင်ရှားသည့် စကားပြေအရေးအသား များကို လေ့လာသင်ယူကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဘဝသင်ခန်းစာများကိုရယူကာ ရသစာပေဖန်တီးသူများဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားသင့်ပါသည်။
ကိုးခန်းပျို့နှင့်ရတုများပါဝင်သည်။ ကိုးခန်းပျို့ကို အင်းဝခေတ်စာဆို ရှင်မဟာရဋ္ဌသာ၏လက်ရာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာစာပေတွင် စံထားရသော ကိုးခန်းပျို့၏အကြောင်းအရာနှင့် အရေးအဖွဲ့စွမ်းရည်တို့ကို လေ့လာသင်ယူကြရမည်။ ကိုးခန်းပျို့တွင် အကြောင်းအရာပိုင်းလေ့လာချက်၌ အခန်း(၉)ခန်းခွဲ၍ အရေးအဖွဲ့ပိုင်းလေ့လာချက်၌ သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ် (၈)မျိုးကို ပိုင်းခြား၍ လေ့လာကြရမည်။ ရတုကဗျာရွေးချယ်ချက်တွင် ရတုကဗျာ (၁၂) ပုဒ်တို့၏ အကြောင်းအရာ၊ အရေးအဖွဲ့လေ့လာချက်တို့ကို သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများမှ အလှူရှင်တို့၏ အလှူမှတ်တမ်းတင်ပုံများကို သိရှိစေရန်၊ ပုဂံခေတ်မြန်မာစကားပြေအရေးအသားနှင့် အရေးပုံသဏ္ဌာန်တို့ကို သိရှိစေရန်၊ ပုဂံခေတ် ကျောက်စာများမှ ပုဂံခေတ်ဦး မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများကို သိရှိစေရန်၊ ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာမှ အလှူရှင်ရာဇကုမာရ်၏ အလှူပြုပုံကိုသိရှိစေရန်၊ ရှေးခေတ်မွန်စာပေ အရေးအသားတို့ကို မြန်မာစာပေအ‌ရေးအသားနှင့်ယှဉ်၍ လေ့လာသိရှိစေရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသော မွန်ဝေါဟာရတို့ကို သိရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာစကားလေ့လာမှုနယ်ပယ်တွင် ဘာသာဗေဒပညာရပ်နှင့် သဒ္ဒဗေဒပညာရပ်တို့ကို သိပ္ပံနည်း ကျကျ လေ့လာရသော ပညာရပ်များဖြစ်သည်။ လေ့လာသူတို့အဖို့ ဘာသာစကားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဘာသာဗေဒတွင် အထွေထွေဘာသာ‌ဗေဒဖွင့်ဆိုချက်၊ ဘာသာစကား၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဘာသာစကားများကို ဖွဲ့စည်းပုံအရအမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ ဘာသာစကား၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ဘာသာစကားမျိုးရိုးများဟူသည့် သင်ခန်းစာများကို လေ့လာ ရပါမည်။သဒ္ဒဗေဒပညာရပ်တွင် အထွေထွေသဒ္ဒဗေဒသဘောကိုပေါ်လွင်အောင် ဘာသာစကား နှင့်ဆက်သွယ်မှု၊ သဒ္ဒဗေဒသဘော၊ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာအကြောင်း၊ စကားသံ၏သဘာဝ၊ အသံထွက်မှုနှင့်သဒ္ဒဗေဒစသည့်အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့် ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဖြစ်ထွန်းစေမည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ရသစာပေ (ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ်) တို့၏ သဘောသဘာဝကိုသိရှိစေရန်၊ ရသ၏အခြေခံသဘောကို အခြေခံကျကျသိရှိနားလည်စေရန်၊ ဘာဝ၊ ဝိဘာဝ၊ အနုဘာဝတို့ ဆက်နွယ်နေပုံကိုသိရှိစေရန်၊ အလင်္ကာနှင့် ရသဆက်နွယ်မှုကိုသိရှိနိုင်စေရန်၊ အသိပေးစာနှင့် စေတနာနှိုးစာပေကွဲပြားပုံကို သိရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ကမ္ဘာ့စာပေသဘောတရားများကိုသိရှိစေရန်၊ စာပေဝေဖန်ရေးသဘောတရား များကိုသိရှိစေရန်၊ ရသပညာရှင်တို့၏အမြင်များကိုသိရှိစေရန်၊ မြန်မာစာပေကိုဝေဖန်သုံးသပ်တတ် စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဝတ္ထု(၂)တွင်ခေတ်ဝတ္ထုများဖြစ်သော နေညိုညိုဝတ္ထုနှင့် ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံဝတ္ထုတို့ ပါဝင်ပါသည်။ နေညိုညိုဝတ္ထု၌ ကာလပေါ်ဝတ္ထုသင်ကြားရေး၊ ကာလပေါ်ဝတ္ထုပေါ်ပါက်လာပုံ၊ (၂၀) ရာစုခေတ်ဦး ကာလပေါ်ဝတ္ထု၏ယေဘုယျလက္ခဏာများ၊ ဝတ္ထုနှစ်မျိုးနှင့်ရှုထောင့်၊ ဝတ္ထုကောင်းတို့တွင်တွေ့နိုင်သော လက္ခဏာများ၊ ဝတ္ထု၏အင်္ဂါရပ်များ၊ ဆရာကြီးပီမိုးနင်း၏ အရေးအဖွဲ့စွမ်းရည်ကို လေ့လာကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံဝတ္ထု၌ ခေတ်ဝတ္ထုပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ဝတ္ထုလေ့လာမှုအခြေခံသဘော တရား၊ ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံဝတ္ထု၏အာဘော်၊ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်လမ်းဆင်းပုံ၊ ဇာတ်ဆောင်အဖွဲ့၊ နောက်ခံဝန်းကျင်နှင့် ဝတ္ထုအရေးအသားများကို ခေါင်းစဉ်ခွဲကာ ဘဝသင်ခန်းစာများကိုရယူကာ ရသစာပေဖန်တီးသူများဖြစ်လာအောင် လေ့လာကြရန်ဖြစ်သည်။
ရာမရကန် နှင့် ခေတ်ကဗျာများပါဝင်သည်။ ရာမရကန်သည် ရကန်စာဆိုတို့တွင်ထင်ရှားသော စာဆိုဦးတိုး၏ လက်ရာဖြစ်ပြီး အခန်းပေါင်း(၃၄) ခန်းရှိသည့်အနက် (၁၆) ခန်းကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ခေတ်ကဗျာရွေးချယ်ချက်တွင် ကိုလိုနီခေတ်ဦးမှ လွတ်လပ်ရေးခေတ်အထိ ဖွဲ့စပ်ထားသောကဗျာတို့ကို လေ့လာသင်ကြားရပါမည်။ ရာမရကန်တွင် ရကန်စာပေ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ရာမရကန်လာ အချီး၊ ကိုယ်ရည်သွေး၊ အကန်အကျောက်၊ ဟာသအဖွဲ့၊ အလှအဖွဲ့၊ သရုပ်ဖော်အဖွဲ့၊ စကားပရိယာယ်ကြွယ်ဝပုံ၊ အရေးအဖွဲ့စွမ်းရည်တို့ကိုလေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ခေတ်ကဗျာတွင် ကိုလိုနီခေတ်ဦးမှလွတ်လပ်ရေးခေတ် အထိပေါ်ထွန်းခဲ့သော ကဗျာများမှ (၁၅)ပုဒ်ကို လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာတစ်ပုဒ်စီမှ ကဗျာစာဆိုအကြောင်း၊ကဗျာ့အကြောင်းအရာနှင့်ရေးဖွဲ့ပုံကိုလေ့လာသင်ယူပြီးခေတ်ကဗျာများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရေးစပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပေသည်။
ပုဂံခေတ်မြန်မာကျောက်စာများမှ အလှူရှင်တို့၏ အလှူပြုပုံများကို သိရှိစေရန်၊ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာမှ ပုဂံခေတ်အလုပ်သမားတို့၏အကြောင်းများကို သိရှိစေရန်၊ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများသည် အလှူမှတ်တမ်းတင်ကျောက်စာများအပြင် အမိန့်တော်ပြန်တမ်းများလည်း ပါဝင်ပုံကို သိရှိစေရန်၊ မင်စာ၏သဘောသဘာဝကို သိရှိစေရန်၊ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့လာ ဇာတ်တော်များမှ ဇာတ်လမ်း အတင်အပြကို သိရှိစေရန်နှင့် ပုဂံခေတ်မင်စာစကားပြေအရေးအသားတို့ကို သိရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာဗေဒ၏အခြေခံကဏ္ဍများ၊ ဘာသာဗေဒအဆင့်များ၊ သဒ္ဒါလေ့လာမှုဆိုင်ရာစကားလုံးဖွဲ့ထုံးနှင့် ဝါကျဖွဲ့ထုံးများကိုလေ့လာသင်ယူကြရမည်။ သဒ္ဒဗေဒကဏ္ဍတွင်လည်း သဒ္ဒဗေဒပညာရှင်များ လေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ဗျည်းနှင့် သရ သတ်မှတ်ချက်၊ သရုပ်ဖော်ချက်များကို ဆက်လက် လေ့လာသင်ယူကြရပါမည်။
မ-၃၁၁၀ (ကမ္ဘာ့စာပေနိဒါန်း၊ ဘာသာပြန်)
အရှေ့တိုင်း(အိန္ဒိယ၊ တရုတ်) တို့၏ စာပေသမိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပုံကိုသိရှိစေရန်၊ ဂန္တဝင်မြောက် စာပေများလေ့လာနိုင်စေရန်၊ အနောက်တိုင်း (ဂရိ၊ ရောမ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ရုရှား။ ပြင်သစ်) တို့ စာပေသမိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပုံကိုသိရှိစေရန်၊ စာပေပညာရှင်များ၊ ဒဿနပညာရှင်များအကြောင်းသိရှိစေရန်၊ စာပေပညာရှင်များ၏ ဘဝနှင့်စာပေတို့ကိုသိရှိပြီး အတုယူတတ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဘာသာပြန်ဆရာတို့၏ ဘာသာပြန်ဆိုပုံနည်းနာများ၊ ဘာသာပြန်ကျွမ်းကျင်လာစေရန်နည်းများ၊ ရှေးခေတ်ဘာသာပြန်မှုသဘောကိုအတုယူတတ်၍ဘာသာပြန်သမိုင်းကြောင်းကိုသိရှိစေပြီးဘာသာခြား စာပေများကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် အသိအမြင် ဗဟုသုတကြွယ်ဝလာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
မ-၃၀၀၁ မြန်မာစာတွင် ပါရာယနဝတ္ထု၊ လောကသာရပျို့၊ ဘာသာစကား (ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒတို့ပါဝင်သည်။ မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် ပထမဆုံးဝတ္ထုအဖြစ်ထင်ရှားသော ရှင်မဟာသီလဝံသ၏ ပါရာယနဝတ္ထုနှင့် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ လောကသာရပျို့များမှ အကြောင်းအရာပိုင်းနှင့် အရေးအဖွဲ့ပိုင်းတို့ကို လေ့လာသင်ယူကြရမည်။ ဘာသာစကားပိုင်းတွင် ဘာသာစကားတို့၏ ယေဘုယျလက္ခဏာ၊ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဘာသာဗေဒနှင့် သဒ္ဒဗေဒသဘောသဘာဝများ စသည်တို့ကို ဘာသာစကားရှုထောင့်မှ လေ့လာသိရှိကြရမည်။
မ-၃၀၀၂ မြန်မာစာတွင် သူဝတ္ထု၊ ခေတ်ကဗျာ၊ ဘာသာစကား (ပုဂံခေတ်မြန်မာကျောက်စာ) နှင့် ဘာသာပြန် (ဘာသာပြန်နည်းနာများ၊ ဘာသာပြန်ဟောပြောချက်များ) တို့ပါဝင်သည်။ စကားပြေ၊ ကဗျာများ၏အကြောင်းအရာပိုင်း၊ အရေးအဖွဲ့ပိုင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဘာသာစကားတို့၏ ယေဘုယျလက္ခဏာ၊ ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း၊ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း၏သဘောသဘာဝများနှင့် ဘာသာပြန်သူတို့တွေ့ကြုံရမည့်အခက်အခဲများ စသည်တို့ကို လေ့လာသိရှိကြရမည်။
ငါးရာငါးဆယ်ဇာတ်ဝတ္ထု၏ သဘောသဘာဝ၊ ဝတ္ထုရှည်သမိုင်းကြောင်း၊ ခေတ်ဝတ္ထုပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ငါးရာငါးဆယ်ဇာတ်များ၏တန်ဖိုး၊ ဇာတ်တော်များမှသင်ခန်းစာယူဖွယ်တို့ကို သိစေနိုင်ပါသည်။ နှင်းငွေ တစ်ထောင့်မိုးတစ်မှောင့်ဝတ္ထုတွင် ရသစာပေ၏သဘောတရားကို နားလည်စေရန်၊ ရသမြောက် ဝတ္ထုကောင်းများ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုသိရှိနိုင်စေရန်၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏ စာပေလက်ရာ အတွေးအမြင်ကို လေ့လာအတုယူတတ်စေရန်၊ ဝတ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်၏ အင်္ဂါရပ်များကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
မ-၄၁၀၂ (ပျို့)တွင် တွင်းသင်းမင်းကြီးဦးထွန်းညို၏ ဘလ္လာတိယပျို့ကို သင်ယူကြရမည်။ ပျို့သမိုင်းအကျဉ်း၊ ပျို့စာဆိုနှင့် ဘလ္လာတိယပျိုအကြောင်း၊ မူရင်းဇာတကနှင့် ပျို့နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ အားပြိုင်မှုနှင့် ဇာတ်လမ်းဖန်တီးပုံ၊ စရိုက်ပုံဖော်မှုများ၊ နောက်ခံဝန်းကျင်နှင့် ဗဟုသုတများအပြင် ရသမြောက်သောအရေးအဖွဲ့များကို သင်ယူကြရမည်။ ပျို့သဘောသဘာဝ၊ ပျို့အကြောင်းအရာနှင့် အရေးအဖွဲ့ပိုင်းတို့ကို စေ့စေ့စပ်စပ် သင်ယူမှတ်သားကြရမည်။
မြန်မာကျောက်စာဘာသာရပ်တွင် ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်ကျောက်စာများမှ အလှူရှင်တို့၏ အလှူပြုပုံများကိုသိရှိစေရန်၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်၏ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချူပ်ရေးဆိုင်ရာ ခေတ်ကြေးမုံ၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်စကားပြေအရေးအသားတို့ကိုသိရှိစေပါသည်။ ရွှေစည်းခုံ မွန်ကျောက်စာသည် ကျန်စစ်သားမင်းကြီး၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကျောက်စာ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိစေရန်၊ ရွှေစည်းခုံ မွန်ကျောက်စာသည် မွန်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကို ဖော်ဆောင်နေသော ကျောက်စာဖြစ်ကြောင်း သိရှိစေရန်၊ မွန်-မြန်မာ ဘာသာစကား(၂)မျိုးကိုယှဉ်၍ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများ၊ ဝါကျဖွဲ့ပုံ၊ သဒ္ဒါအသုံးအနှုန်းတို့ကို သိရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာဗေဒတွင် အစဉ်အလာသဒ္ဒါ၊ အစဉ်အလာသဒ္ဒါနှင့် ဘာသာဗေဒအမြင်၊ ခေတ်သစ်သဒ္ဒါတို့ကို လေ့လာဆည်းပူးကြရမည်။ သဒ္ဒဗေဒတွင် အခြေခံသရစနစ်၊ သံရင်းအမျိုးအစား၊ လက်တွေ့ သဒ္ဒဗေဒတို့ကို လေ့လာဆည်းပူးကြရမည်။
သုတေသနနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သော သုတေသနအခြေခံသဘောတရားများ၊ သုတေသနပြုရန် အကြောင်းအရာရွေးချယ်ခြင်း၊ အထောက်အထားရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း၊ သုတေသနစာတမ်းပုံစံ၊ အကိုး အထောက်များဖော်ပြခြင်း စသည်တို့ကို လေ့လာသင်ယူကြရမည်။ မြန်မာဒေသိယ စကားများ(၁)တွင် နေရာဒေသအလျှောက် ဝေါဟာရကွဲပြားသော ဒေသဒေသိယစကားများအကြောင်း ပါဝင်သဖြင့် ဒေသဒေသိယစကားစများ၏ ကွဲပြားသော ဝေါဟာရများကို လေ့လာသိရှိကြရမည်။
မ-၄၁၀၆ (ပြဇာတ်)တွင်ဦးပုည၏ ဝိဇယပြဇာတ်ကိုသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်ပြဇာတ်တို့၏ သဘောသဘာဝ၊ ယေဘုယျလက္ခဏာတို့ကို သိရှိစေရန်၊ ပြဇာတ်များရေးသားတတ်စေရန်၊ မြန်မာပြဇာတ်များ ပေါ်ပေါက်လာပုံကို သိရှိစေရန်၊ ပြဇာတ်သမိုင်းများ သိရှိစေရန်နှင့် ရှေးပြဇာတ်ဆရာတို့ကို အတုယူ၍ ရေးသားတတ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်သစ်ပြဇာတ်တွင် ပြဇာတ်ဟူသော ဝေါဟာရကို သိရှိစေရန်၊ ပြဇာတ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ပြဇာတ်သမိုင်းကြောင်းကို သိရှိစေရန်၊ ရှေးပြဇာတ်နှင့် မတူညီပုံကို သိရှိစေရန်၊ ခေတ်သစ်ပြဇာတ်တို့၏သဘောကို သိရှိစေရန်၊ ပြဇာတ်ဆရာများ၏ ရေးသားတင်ပြပုံကို အတုယူတတ်စေရန်နှင့် ဇာတ်လမ်းဖန်တီးမှုအတတ်ပညာကို သိရှိပြီး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတတ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
မ-၄၁၀၇ (ဇာတိမာန်စာပေ)တွင် ဇာတိမာန်ဟူသည် ၊ ဇာတိမာန်စာပေနှင့်သဘောသဘာဝ၊ မြန်မာစာပေခေတ်အသီးသီးတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဇာတိမာန်စာပေသမိုင်းအကျဉ်းနှင့် ဇာတိမာန်စာပေများအကြောင်းတို့ ပါဝင်သည်။ မြန်မာစာပေတွင်တွေ့ရသော ဇာတိမာန်မြောက်သည့် ကဗျာများ၊ စကားပြေများ၊ဝတ္ထုများ၏ အကြောင်းအရာနှင့် ရေးဖွဲ့တင်ပြပုံကို လေ့လာသိရှိကြရမည်။
ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်ကျောက်စာများမှ အလှူရှင်တို့၏အလှူအပေါ်ထားရှိသော စေတနာ သဒ္ဓါတရားတို့ကို သိရှိစေရန်၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်ကျောက်စာများမှဝါကျဖွဲ့ထုံး၊ ဝေါဟာရ အသုံးထူး၊ အလင်္ကာ၊ သဒ္ဒါအသုံးတို့ကို သိရှိရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေစည်းခုံမွန်ကျောက်စာ (ဂ)၊ (ဃ)မှ ကျန်စစ်သားမင်းကြီး၏ တိုင်းပြည်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို သိရှိစေရန်၊ ရွှေစည်းခုံမွန်ကျောက်စာမှ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးလက်ထက် အရိမဒ္ဒနပူရပြည်၏ အခြေအနေများကို သိရှိစေရန်နှင့် မွန်-မြန်မာဘာသာစကားနှစ်မျိုးကို ယှဉ်ဝေါဟာရအသုံး၊ ဝါကျဖွဲ့ပုံ၊ သဒ္ဒါအသုံးတို့ကို သိရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာဗေဒတွင် အနက်အဓိပ္ပာယ်၊ ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာပညာရပ်ခွဲ စသည်တို့ကို လေ့လာဆည်းပူးကြရမည်။ သဒ္ဒဗေဒတွင် ဝဏ္ဏတည်ဆောက်မှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ၊ ထပ်ဆင့်အသံပြုခြင်း၊ စကားသံဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို လေ့လာဆည်းပူးကြရပါမည်။ အထက်ပါ အခြေခံအကြောင်းအရာများကို လေ့လာဆည်းပူးခြင်းဖြင့် မိမိ၏ဘာသာစကားနှင့် အခြားသော ဘာသာစကားတို့၏ ကွာခြားမှု၊ တူညီမှုဖြင့် ဘာသာစကား၏ အရေးပါမှုတို့ကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မ-၄၁၁၀ တွင် သတေသနလက်တွေ့ပြုလုပ်လျှင် ကျင့်သုံးရမည့် စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုခြင်း၊ စာစုစာရင်းပြုစုခြင်း၊ မှတ်စုထုတ်ခြင်း၊ ကျမ်းကိုးစာရင်းပြုစုခြင်း၊ သုတေသနစာတမ်း ရေးသားခြင်း တို့ပါဝင်သည်။ မြန်မာဒေသိယစကားများ(၂) တွင် နေရာဒေသအလျှောက်ကွဲပြားသော ဒေသဒေသိယ စကားများအကြောင်းကို လေ့လာကြရပါမည်။
မ-၄၀၀၁ မြန်မာစာတွင် စကားပြေ၌ ဝေဿန္တရာဇာတ်တော်ကြီးဝတ္ထုကောက်နုတ်ချက်၊ က‌ဗျာတွင် စုံနံ့သာမြိုင်ရှာပုံတော်ကြီးနှင့် ဘာသာစကားပိုင်းတွင် ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒတို့ကို လေ့လာကြရမည်။ ဝေဿန္တရာဇာတ်တော်ကြီးဝတ္ထုမှ ဘုရားရှင်တို့၏ကျင့်စဉ်နှင့် လောကီလောကုတ္တရာ သာသနာအကျိုးပြုပုံများနှင့် ဆရာတော်ဦးဩဘာသ၏ အရေးအသားကို လေ့လာသိရှိကြရမည်။ စုံနံ့သာမြိုင်ရှာပုံတော်ကြီးတွင် စာဆိုဦးကြော့၏ အလွမ်းရသပေါ်လွင်စေသော အရေးအဖွဲ့များကို လေ့လာသိရှိကြရမည်။ ဘာသာစကားပိုင်းတွင် ဘာသာဗေဒ၏ အခြေခံကဏ္ဍများနှင့် မြန်မာသဒ္ဒါလေ့လာမှုတွင် ဘာသာဗေဒရှုထောင့်မှ စနစ်တကျလေ့လာနိုင်ပြီး သဒ္ဒဗေဒတွင်လည်း သဒ္ဒဗေဒ၏အခြေခံသဘောသဘာဝများနှင့် မြန်မာစကားလုံးကို သဒ္ဒဗေဒရှုထောင့်မှ လေ့လာနိုင် ကြမည်ဖြစ်သည်။
မ-၄၀၀၂ (မြန်မာစာ) တွင် စကားပြေ၌ နေရီရီဝတ္ထုကောက်နှုတ်ချက်၊ ကဗျာကောက်နှုတ်ချက်နှင့် ဘာသာစကားပိုင်းတွင် ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ် မြန်မာကျောက်စာများ၊ မြန်မာဘာသာစကားရှိ စကားလုံးတို့၏ သဘာသဘာဝနှင့် ပြောင်းလဲပုံများ၊ ဘာသာပြန်နည်းနာများကို လေ့လာကြရမည်။ မြန်မာဝတ္ထု၊ ကဗျာတို့၏ အကြောင်းအရာနှင့် ရေးဖွဲ့ပုံများ၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်ကျောက်စာတို့မှ သာသနာရေး၊ လူမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး စသော မှတ်သားလေ့လာဖွယ်ရာများ၊ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်း၊ ဝါကျဖွဲ့ထုံးများကို လေ့လာကြရမည်။ ဘာသာဆောင်းပါးတွင် မြန်မာစကားလုံးတို့ပြောင်းလဲပုံများ၊ သဘောသဘာဝများ၊ ဘာသာပြန်ကဏ္ဍတွင် ဘာသာပြန် လုပ်ငန်း၏ သဘောသဘာဝများကို လေ့လာကြရမည်။
မ-၅၁၀၁/၅၂၀၁ စကားပြေ(၁) သူမ-ဝတ္ထု၊ ရသစာပေစာတမ်း
သူမ-ဝတ္ထုသင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် -	စာရေးသူ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ အတွေး၊ အရေးတို့ကို သိမြင်နိုင်စေရန် -	ဝတ္ထု၏ အတတ်ပညာ၊ သဘောသဘာဝတို့နှင့် ချိန်ထိုးအတုယူတတ်စေရန် -	သူမဝတ္ထုမှ အဓိကဇာတ်ဆောင် အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိစေရန် -	ဝတ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည့် သူမဝတ္ထုကို စာရေးသူက မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သည် ကို ဖော်ထုတ်တတ်စေရန် -	သူမဝတ္ထုမှ ဇာတ်ဆောင်အသီးသီးတို့၏ အပြုအမူအမျိုးမျိုးကို ဝေဖန်သုံးသပ်တတ်စေရန် -	ခေတ်ကာလနောက်ခံဝန်းကျင်တို့ကို သိမြင်ပြီး သုံးသပ်တတ်စေရန် -	စာရေးသူသည် ဇာတ်လမ်းအလှည့်အပြောင်းများကို မည်သို့ ဖန်တီးတတ်ပုံတို့ကို သိရှိနားလည် စေရန် ရသစာပေစာတမ်းများ သင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် -	ရသစာပေစာတမ်းတွင် စာရေးဆရာများစွာတို့၏ ရသစာတမ်း ပါဝင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ရသစာပေ စာတမ်းများကို ရေးသားပုံရေးသားနည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန် -	ရသစာပေစာတမ်းတို့၏ သဘောသဘာဝ၊ ပေးနိုင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များ သိရှိနိုင်စေရန် -	ရသစာတမ်းများမှ စာရေးသူတို့၏ အတွေးအမြင်ကို လေ့လာတတ်စေရန် -	ရသစာတမ်းများမှ ပေးသော ဘဝအားမာန်သင်ခန်းစာများကို မြင်တတ်စေရန် -	ရသစာပေစာတမ်း၏ လက္ခဏာများကို သိရှိပြီး ချိန်ထိုးတတ်စေရန် -	စာဖတ်သူကိုစွဲဆောင်နိုင်အောင် စာရေးဆရာကြီးများ၏အရေးအသားများကိုအတုယူတတ်စေရန်
(က) ဂီတစာပေသင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း မြန်မာစာအထူးပြုနှင့် မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ်အတန်းတွင် ဂီတစာပေ ကို လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဂီတစာပေတွင် မဟာဂီတစာပေ၏သဘောသဘာဝ၊ မဟာဂီတ စာပေသမိုင်းအကျဉ်း၊ မဟာဂီတအမျိုးအစားများကို လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ မဟာဂီတ ရွေးချယ်ချက်တွင် “ကျွန်းကျွန်းပိုင်သ၊ ဂန္ဓမာတောင်၊ ထူးမခြားနား၊ ဆဒ္ဒန်အိုင်သာ၊ ရေယမုန်၊ ချစ် သမျှကို၊ မြမန်းဂီရိ၊ တောနှင့်တောင်စွယ်၊ စိန်မြရံခြယ်၊ မိန့်တော်သံရိပ်ကိုလ” စသည့် ဘုန်းတော်ဘွဲ့၊ သီချင်းခံ၊ ပတ်ပျိုး၊ ယိုးဒယား၊ မွန်သံ၊ တေးထပ်များကို လေ့လာသင်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ (ခ) ကဗျာဖွဲ့နည်း ကဗျာဖွဲ့နည်းတွင်လည်း မြန်မာကဗျာဖွဲ့နည်းနှင့် ကဝိဘာရတီကျမ်းများကို လေ့လာ၍ ကဗျာ ကောင်းများ ရေးဖွဲ့တတ်စေရန် ရှေးစာပေများလေ့လာခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီး ဂီတ၏သဘော သဘာဝကောင်းများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပါမည်။
မ-၅၁၀၃/၅၂၀၃ ရသ/စာပေသဘောတရား၊ စာပေဝေဖန်ရေး(၁)
သင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် ရသစာပေဖန်တီးရာတွင် စာရေးသူ၏ စေတနာနှင့် ရေးဖွဲ့ပုံ၊ ပုံသဏ္ဌာန်တို့သည် ရသစာပေတစ်ပုဒ်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး အရေးပါမှုများ၊ ဌာယီဘာဝ၊ ဝိဘာဝ၊ အနုဘာဝ၊ ဗျဘိစာရိဘာဝတို့ အချိုးညီစွာ ပေါင်းပြီး ရသအဆင့်သို့ကူးပြောင်းမှုများ၊ စာပေအရေးအဖွဲ့တွင် သဒ္ဒါလင်္ကာရ၊ အတ္ထာ လင်္ကာရတို့သည် စာတစ်ပုဒ်၏ ပန်းတိုင်ရသသို့ ရောက်အောင် အထောက်အကူပြုနိုင်ပုံများ၊ ရသ စာပေဖန်တီးရာတွင် “စိတ်ကူးယဉ်”နှင့် “စိတ်ကူးဉာဏ်” တို့၏ အစွမ်းသည် ကဗျာစာပေ အဆင့် အတန်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်ပုံများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပါမည်။ ခေတ်ပေါ်စာပေနှင့် ပတ်သက်၍ စာပေဝေဖန်ရေး အရေးအသားတွင် စစ်ပြီးခေတ်လောက်မှ စ၍ စာပေသဘောတရားများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ စာပေဝေဖန်ရေးဟူသည်မှာ ရသစာပေ ဆွေးနွေးပွဲမှဖြစ်ပေါ်လာသောဝေါဟာရဖြစ်တည်ရှိလာပုံ၊ စာပေဝေဖန်ရေးသည် ခေတ်၏အခြေအနေ မှန်ကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြင့် စာဖတ်သူများက မိမိတို့ဖြတ်သန်းနေရသော ခေတ်ကာလ၏ အခြေအနေ ကို သိမြင်ခြင်းဖြင့် ခေတ်ပြိုင်သမိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ခံစားစေရန်၊ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ကောင်းသည် ဆိုး သည်ဟု အကဲဖြတ်ပေးမှုများပါက ဝေဖန်ရေးသဘောတရားသည် စာပေတိုးတက်အောင် မြှင့်တင် ပေးနိုင်ပုံ၊ စာပေဝေဖန်ရေးသည် လူးလွန့်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေသော ခေတ်တို့တွင် ပါရမည်ဖြစ်ပုံ၊ အသစ်တစ်ခုဆီသို့ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေသော ကြားကာလတွင် အယူအဆအမျိုးမျိုးတို့သည် ဖြစ် ပေါ်တတ်ပုံ၊ ဝေဖန်ရေး၏စံတို့သည် ခေတ်အလိုက်ရှိမြဲဖြစ်ပုံ၊ မိမိနိုင်ငံ စာပေဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဝေဖန်ရေးသဘောတရားများစွာ လိုအပ်ပုံများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပါမည်။
မ-၅၁၀၄/၅၂၀၄ ဘာသာစကား-၁ (ကျောက်စာ၊ မင်စာ၊ မွန်ကျောက်စာ)
၁။ မြန်မာကျောက်စာ၊ မင်စာ -	အသစ်တွေ့ မြန်မာကျောက်စာများမှ အလှူရှင်တို့၏ အလှူမှတ်တမ်းများ -	အလှူပြုချိန် နှစ်၊ လ၊ ရက်တို့နှင့် အလှူရှင်တို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ -	ပုဂံခေတ်မှ မျက်မှောက်ခေတ်အထိ မျိုးပြအသုံးများပြောင်းလဲလာပုံ -	အသစ်တွေ့မင်စာနှင့် လောကထိပ်ပန်မင်စာတို့၏ ကွာခြားချက် -	အသစ်တွေ့မင်စာများသည် ကျောက်စာများကဲ့သို့ အလှူမှတ်တမ်းများဖြစ်ကြောင်းသိရှိစေရန် ၂။ မွန်ကျောက်စာ (ကျိုက်တလန်းမွန်ကျောက်စာ) - သထုံခရိုင်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ အရက်သည်မရွာအနီးတွင် တွေ့ရှိ၍ အလွန်ရှေးကျသော ပုဂံခေတ် ကျောက်စာဖြစ်ပုံ၊ နေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်ကင်းလွတ်စေရန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ထားရှိခဲ့ပုံ၊ ပထမဆုံးဖတ်ရှု သူမှာ လန်ဒန်တက္ကသိုလ် ပါရဂူဒေါက်တာ ဘလက်ဒင်ဖြစ်ပုံ၊ ''ကျာက်တလင်'' အမည်အရ မွန်တို့ ဒေသရှိ ဘုရားဖြစ်ပုံ၊ ကျောက်စာတိုင်ကြီး၏ မူလနေရာကို ရှာဖွေခဲ့သူမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာန ဖခင်ကြီး ဆရာကြီးဉီးဖေမောင်တင်ဖြစ်ပုံတို့ကို ဉီးစွာသိရှိစေပါသည်။ - ပုဂံခေတ်ကျန်စစ်သားမင်းပြုပြင်ခဲ့သော ကျိုက်တလန်းဘုရား၊ အမြှောင့်ရှစ်မြှောင့်အောက်ခံ၍ တည်ထားပုံနှင့် ကျောက်စာပါအကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းသင်ကြားစေပါသည်။ - မွန်စကားလုံးဖွဲ့ပုံ၊ ဝါကျဖွဲ့ပုံ၊ ရှေးမွန်မှ ခေတ်မွန်သို့ ပြောင်းလဲပုံများကိုလည်း သိရှိစေပါသည်။
မ-၅၁၀၅/၅၂၀၅ ဘာသာစကား(၂) (ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ)
ဘာသာဗေဒ ဘာသာစကားမျိုးရိုးနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကားမိတ်ဆက် ခေတ်သစ်သဒ္ဒါ (က) အဆောက်အအုံသဒ္ဒါ (Structural Grammar) (ခ) ထုတ်လုပ်ရေးသဒ္ဒါ (Generative Grammar) (ဂ) သဏ္ဌာန်ပြောင်းသဒ္ဒါ (Transformational Grammar) အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကားမျိုးရိုးနှင့် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မလေးရှား စသော အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပုံ၊ စကားသံစနစ်၊ စကားလုံးစနစ်၊ အရေးအသားစနစ်ကို မိတ်ဆက်လေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာဗေဒအရ အဆောက်အအုံသဒ္ဒါရှုထောင့်မှ ဘာသာစကားများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးသဒ္ဒါ၊ သဏ္ဌာန်ပြောင်းသဒ္ဒါရှုထောင့်မှ ဘာသာစကားရှိ စကားလုံး၊ ပုဒ်၊ ဝါကျတို့ကို စနစ်တကျအတိုင်း အဆမရှိ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်ပုံကို လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သဒ္ဒဗေဒ ဤမော်ဂျူးတွင် သဒ္ဒဗေဒပညာရပ်၏ စကားသံများကို သိပ္ပံနည်းကျကျ သရုပ်ဖော်လေ့လာမှု များအား သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် စကားသံဖွဲ့မှုအပိုင်းတွင် စကားသံထုတ်လုပ်မှု အကြောင်းအရာ၊ စကားသံဖွဲ့မှု အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။ စကားသံတို့အနက် ဘာသာစကား တစ်ခုချင်းအတွက် အသံအရေအတွက် ကန့်သတ်ပုံ၊ ကွဲပြားသော စကားသံအချင်းချင်း စနစ်တကျ ပေါင်းစပ်၍ ဝဏ္ဏဖွဲ့ပုံတို့၏ စည်းကမ်းနှင့်စနစ်ကို လေ့လာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သင်ကြားခြင်းဖြင့် ဘာသာစကားတို့၏ သဒ္ဒဗေဒနှင့် စကားသံဖွဲ့ပုံ လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။
မ-၅၁၀၆/၅၂၀၆ ဘာသာစကား(၃) (အတ္ထဗေဒ၊ သုတေသနနည်းပညာ)
၁။ အတ္တဗေဒ အတ္ထဗေဒသည် ဘာသာဗေဒ၏ ပညာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတ္ထဗေဒသည် အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို လေ့လာသောပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကား၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ရုပ်ရင်း(Morpheme)၊ စကားလုံး(Word)၊ ပုဒ်(Phrase)၊ ဝါကျခွဲ(clause)၊ ဝါကျ(sentence) တို့၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို လေ့လာသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ၂။ မဟာသုတေသန -	မဟာသုတေသနပညာရပ်တွင် သုတေသနနည်းပညာကို သုတေသနအခြေခံနှင့် သုတေသနပုံစံဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားလေ့လာဆည်းပူး သင်ကြားရမည်။ -	သုတေသန အခြေခံတွင် သုတေသနသဘော၊ သုတေသနပြုရန် အကြောင်းအရာရွေးချယ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုရန် အထောက်အထားများ ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်စုထုတ်ခြင်းနှင့် သုတေသန စာတမ်းရေးရန် ပုံစံချခြင်းအကြောင်းများကို လေ့လာသင်ကြားပါမည်။ -	သုတေသနပုံစံတွင် သုတေသနပြုရာတွင် ရှိရမည့်အရည်အချင်း၊ သုတေသနပြုနည်းများ၊ သုတေသနအကြောင်းအရာရွေးချယ်ပုံ၊ ဆောင်သင့်ရှောင်သင့်သည့်အချက်များ၊ အထောက်အထား များ မည်သို့ရှာဖွေစုဆောင်းသင့်သည့် အချက်များကို လေ့လာဆည်းပူးသင်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
မ-၅၁၀၇/၅၂၀၇ စကားပြေ(၂) ဓမ္မဝိလာသဝတ္ထု၊ ရသစာတမ်း
ဓမ္မဝိလာသဝတ္ထု သင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် -	စာရေးဆရာလင်းယုန်သစ်လွင် -	၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားစာပေဝတ္ထုရှည်ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။ -	ဝတ္ထုရှည်သဘောတရား၊ ဝတ္ထုရှည်အတတ်ပညာများကို လေ့လာပြီး ဓမ္မဝိလာသဝတ္ထုကို ချိန်ထိုး လေ့လာတတ်စေရန် -	ဝတ္ထုရှည်၏ ခေတ်ကာလအခြေအနေကို ရှုမြင်သုံးသပ်တတ်စေရန် -	ဝတ္ထုရှည်ဖန်တီးရာတွင် ပါဝင်လေ့ရှိသည့် လူတို့၏ စရိုက်သဘာဝ၊ အဖြစ်အပျက်တို့ကို ရှုမြင် သုံးသပ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်စေရန် -	စာရေးဆရာကြီး လင်းယုန်သစ်လွင်၏ ရေးဟန်၊ ရေးသားတင်ပြပုံတို့ကို အတုယူတတ်စေရန် -	ဝတ္ထုရှည်များသည် ဉီးတည်ချက်ပေါ်လွင်မှု ရှိ/မရှိ၊ ယုတ္ထိခိုင်လုံမှု၊ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုများကို လေ့လာတတ်စေရန် ရသစာပေစာတမ်းများ သင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် -	ရသစာတမ်း၏ လက္ခဏာရပ်များ လေ့လာမိစေရန် -	ရသစာတမ်းများစွာ ပါရှိသဖြင့် စာရေးဆရာတို့၏ ရသစာပေစာတမ်း ရေးသားနည်း၊ ရေးဟန်များ ကို အတုယူတတ်စေရန် -	ရသစာပေ၏သဘောနှင့် သုတစာပေ၏သဘောကို ခွဲခြားသိမြင်တတ်စေရန် -	ရသစာပေသည် စာဖတ်သူ၏ရင်ကို ထိမိစေနိုင်ရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့ဖန်တီးရပုံတို့ကို သိနားလည် နိုင်စေရန် -	ရသစာပေ၏ အစွမ်းသတ္တိ၊ တန်ဖိုးကို နားလည်နိုင်စေရန်
ခေတ်ကဗျာများ ခေတ်ကဗျာများ (၁၄)ပုဒ်ကို စုစည်းသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာကဗျာဖွဲ့နည်းပုံစံမှ ခွဲထွက်၍ ခံစားမှုကို တစိမ့်စိမ့်တွေးယူခံစားရေးဖွဲ့ထားသော ကဗျာပုံသဏ္ဌာန်လမ်းကြောင်းသစ်ကို လေ့လာကြရမည်။ အရေးအဖွဲ့များသည် ခံစားမှုကို ရိုးရှင်းမြင်သာအောင် ရေးဖွဲ့ထားသည်။ အကြောင်းအရာ၊ ကဗျာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာ လွယ်ကူသယောင်နှင့် ရသပေးပုံမှာ ပရိယာယ်ပါ လာသည်။ ကာရန်၊ နရီ၊ နမိတ်ပုံများ ထင်ဟပ်လာသည်။ ကဗျာအလှကို ဉီးစားမပေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးထင်ဟပ်ချက်များ၊ လူမှုဝန်းကျင်ထောက်ပြအဖွဲ့များဖြင့် သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ဘဝနှင့် လူ့ အဖွဲ့အစည်းကို ပေါင်းစည်းရေးဖွဲ့ထားကြောင်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
မ-၅၁၀၉/၅၂၀၉ ရသ/စာပေသဘောတရား၊ စာပေဝေဖန်ရေး(၂)
ရသ သဘောတရား - မြန်မာစာပေကို ချဉ်းကပ်လေ့လာရာ၌ ရသ၏ အာနိသင်ကို ဖမ်းစားနိုင်ရန် လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူ၏ စိတ်အာရုံဖြင့် ဖန်တီးရေးဖွဲ့ထားသော စာပေပုံသဏ္ဌာန်များသည် စာဖတ်သူ၏ စိတ်အာရုံအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့်အခါ နှစ်သက်ခြင်းသဘောကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုသဘောသည် ရသဖြစ်သည်။ ထိုသို့ နှစ်သက်ခြင်းသဘော ရသအဖြစ်မှ လောကကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်လည် သတိပြုဆင်ခြင်လာမိစေသည်။ မိမိဘဝအမောကိုလည်း ပြေစေသည်။ ထိုသဘောကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာ နိုင်ရန်အတွက် ဆရာဇော်ဂျီ၏ ရသစာပေအဖွင့်နှင့်နိဒါန်း၊ ဉီးရွှေအောင်၏ ရသစာပေ၏ ရသ စာအုပ် များကို လေ့လာကြရမည်။ စာပေဝေဖန်ရေး သင်ကြားခြင်း ရည်မှန်းချက် ဒဂုန်တာရာ၏ ဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးများသည် လူသားများအား ပြုပြင်ပုံ၊ လူသားများကြောင့် ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာပုံ၊ မြန်မာစာပေကို ကမ္ဘာ့ဂန္ထဝင်စာပေသို့သွင်းရန် ဝေဖန်ထားပုံများ၊ ဝေဖန်ရာတွင် အနက်ဖွင့်အကဲဖြတ်နည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံဝေဖန်နည်း၊ ရည်ရွယ်ချက်အခြေပြု ဝေဖန်ရေး၊ အတွင်းဝေဖန်ရေး၊ ခံစားမှုအဓိကဝေဖန်ရေးနည်းများဖြင့် ဝေဖန်အကဲဖြတ်ထားပုံများ ကိုလည်း လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏ ဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးများတွင် ဆရာကြီးက စာပေသည် သမိုင်းခေတ်နှင့် တွဲလျက်ရှိပုံ၊ ပညာရေးမှာတက္ကသိုလ် ပညာရေးသည် အရေးကြီးပုံကို ဝေဖန်ထားသည်။ ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးများ၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏ ဝေဖန်ရေးစာပေများကို လူငယ်များနှစ်သက်ကြ၊ လူတန်းစား တစ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုပုံ၊ စိတ်ကူးယဉ်စာပေ အင်အားစုသည် လူငယ်များအကြိုက်ဖြစ်၍ သရုပ်ဖော် စာပေအင်အားစုသည် ရသစာပေမွေ့လျော်သူများအကြိုက်ဖြစ်လေသည်။ စာရေးဆရာများသည် ခေတ်ကို ကမ္ဗည်းထိုးသူများဖြစ်သည်ဟု ဝေဖန်ထားသည့် ဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးများကို လေ့လာနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
မ-၅၁၁၀/၅၂၁၀ ဘာသာစကား-၄(ကျောက်စာ၊ မင်စာ၊ ပျူ)
၁။ မြန်မာကျောက်စာ၊ မင်စာ -	အသစ်တွေ့ မြန်မာကျောက်စာများမှ ဆုတောင်းနှင့် ကျိန်စာသဘော -	အသစ်တွေ့ မြန်မာကျောက်စာများမှ ပုဂံခေတ် ကျွန်အမည်များမှည့်ခေါ်ပုံ -	အသစ်တွေ့မင်စာများတွင် တွေ့ရသော မြန်မာဆွေမျိုးစပ် ဝေါဟာရများ -	အသစ်တွေ့ကျောက်စာ၊ မင်စာတို့တွင် တွေ့ရသော ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံ၊ စကားအသုံး၊ သဒ္ဒါအသုံးတို့ကို သိရှိစေရန် ၂။ ပျူ (ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ) - ပုဂံခေတ်ထက်ရှေးကျ၍ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားခဲ့သည့် ပျူလူမျိုးတို့၏ စာပေ၊ ဂီတ၊ အနုပညာ၊ဗိသုကာအထောက်အထားများကို မြစေတီပျူကျောက်စာ(ခေါ်)ရာဇကုမာရ်ပျူကျောက်စာ ၌ တွေ့ရှိရပါသည်။ ဘာသာစကားလေးမျိုးဖြစ်သော ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ ပျူ၊ မွန်ဘာသာတို့ကို အသုံးပြု ထားသော်လည်း အကြောင်းအရာတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ပုံ - ရာဇကုမာရ်၏ မိသားစုအကြောင်း ရေးထိုးထားခြင်းကို အကြောင်းအရာပိုင်းအရ လေ့လာ နိုင်ပါသည်။ - ပျူစာပေအရေးအသားပိုင်းအရ ပျူစာပေ၌ ဧကဝဏ္ဏ၊ ဗဟုဝဏ္ဏ စကားလုံးများရှိပုံ၊ ရုပ်သီး၊ ရုပ်မှီးများ ပေါင်းစပ်၍ ပျူစကားလုံးများ နာမ်အထူးပြုများ၊ ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံစသည်တို့ကို လေ့လာနိုင် စေပါသည်။ ဤကျောက်စာလေ့လာခြင်းဖြင့် ပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်သော ပျူစာပေကို လေ့လာ ဖော်ထုတ်ရန်၊ ရှေးဟောင်းမွန်၊ မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ အက္ခရာတို့ ဆက်နွယ်မှုကို လေ့လာရန် စသည့် စာပေတန်ဖိုးကိုလည်း သိရှိစေပါသည်။
မ-၅၁၁၁ + မ- ၅၂၁၁ ဘာသာစကား(၅) အရေးရုပ်သွင်ဗေဒ၊ ဟန်ဗေဒ
အရေးရုပ်သွင်ဗေဒ -	ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်၍ လူသားတို့၏ အထိရောက်ဆုံး တီထွင်မှုဖြစ်သော အရေးအသား စနစ်၏ အရေးပါပုံ၊ အပြောစကား၏ သင်္ကေတဖြစ်သော အရေးအသားစနစ်သည် ဘာသာစကား အလိုက် အများသဘောတူသတ်မှတ်ထားသော အရေးအက္ခရာ အမှတ်အသား သင်္ကေတများကို စီစဉ်ထားသိုအသုံးပြုပုံ အသုံးပြုနည်းများကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ -	ကမ္ဘာ့အရေးအသားစနစ်၏ လက္ခဏာရပ်များဖြစ်သော စကားသံကို အခြေပြုသော အရေးအသား စနစ်နှင့် စကားသံကို အခြေမပြုသော အရေးအသားစနစ်များ၏ သဘောလက္ခဏာများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် -	မြန်မာစာအရေးအသားစနစ်၏ သဘောလက္ခဏာများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် မြန်မာစကားသံများကို ဖော်ပြနိုင်ရန် စနစ်တကျစီစဉ်ထားသို အသုံးပြုသော မြန်မာစာအရေးအသားစနစ်၏ အရေးပါပုံကို ဆည်းပူးလေ့လာနိုင်ရန် -	အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ အရေးအသားစနစ်များကို မိတ်ဆက်သင်ကြား သင်ယူနိုင်ရန် ရည်မှန်းပါ သည်။ ဟန်ဗေဒ -	ရေးဟန်ပညာ (Stylistics)သည် ရေးဟန်ကို လေ့လာသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ‘ရေးဟန်ပညာ’ ‘ပြောဟန်ရေးဟန်ပညာ’ ‘ဟန်ဗေဒ’ စသည်ဖြင့်လည်းခေါ်သည်။ ဟန်ကို ‘အသွင်အပြင်’ ‘အမူအရာ’ ဟု အဘိဓာန်က ဖွင့်သည်။ ထိုဖွင့်ဆိုချက်အရ အသွင်အပြင် အမူအရာ မြင်နိုင်သော သက်ရှိသက်မဲ့ အကောင်အထည်မှန်သမျှတွင် ဟန်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် ဘာသာ ဗေဒနှင့် အခြားပညာရပ်များကို ပေါင်းစပ်လေ့လာသော ပညာရပ်နယ်ပယ်များ ပေါ်ထွန်းလျက်ရှိရာ ရေးဟန်ပညာသည်လည်း ဘာသာဗေဒနှင့်စာပေလေ့လာမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်လေ့လာသော နယ်ပယ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေးဟန်ပညာသည် ရေးဟန်ကို လေ့လာသော ပညာရပ်ဖြစ်သည့်အလျောက် ဤပညာရပ်ကို သင်ကြားလေ့လာရခြင်းဖြင့် စာပေအရေးအဖွဲ့များ၏ ဘာသာစကား အသုံးပြုပုံ များကို သိရှိခွင့်ရသည်။
လူမှုဘာသာဗေဒ၊ လက်တွေ့အတ္ထဗေဒ၊ သုတေသနလက်တွေ့ လူမှုဘာသာဗေဒသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဘာသာစကားကို လက်တွေ့အသုံးပြုရာတွင် ကျင့်သုံးလိုက်နာသည့် ကျင့်ဝတ်များစွာကို လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ဘာသာဗေဒတွင် လက်တွေ့အတ္ထဗေဒသည် အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ဘာသာစကားအသုံးပြု သူ၏ ရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အတ္ထဗေဒသည် စကားပြောသူတို့က စကားကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပုံ၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရာတွင် မည်သို့ကန့်သတ်ချက်ရှိပုံ၊ တစ်ဉီးပြောသော စကားက တစ်ဉီးပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းတို့ကို အထူးသဖြင့် လေ့လာသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ -	သုတေသနလက်တွေ့ပညာရပ်အကြောင်းကို လေ့လာဆည်းပူးကြရပါမည်။ သုတေသနလက်တွေ့ သည် စာကြည့်တိုက် အသုံးပြုခြင်း၊ စာစာရင်းပြုစုခြင်း၊ မှတ်စုထုတ်ခြင်း၊ ကျမ်းကိုးစာရင်း ပြုစုခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ -	သုတေသနနည်းပညာရပ်အကြောင်း လေ့လာခြင်းသည် သုတေသနအခြေခံနှင့် သုတေသနပုံစံ တို့ကို သိရှိနားလည်ပြီး သုတေသနနည်းပညာသဘောတရားများကို လေ့လာအသုံးချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မ-၆၁၁ (စာ) ရသစကားပြေ၊ ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်၊ ပြဇာတ်
(က) ဝတ္ထုတိုသင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် -	ဝတ္ထုတိုဟူသည် ဝတ္ထုတိုသဘောသဘာဝ၊ ဝတ္ထုတိုအတတ်ပညာများကို သိရှိနားလည်စေရန် - ကိုလိုနီခေတ် ၁၉၃၀ နောက်ပိုင်း ဝတ္ထုတိုများမှ ပီမိုးနင်း၊ ဦးဖိုးကျား၊ သိန်းဖေမြင့်၊ ဇော်ဂျီ၊ မင်းသုဝဏ်၊ သိပ္ပံမောင်ဝတို့၏ ဝတ္ထုတိုများကို ခြုံ၍သိရှိစေရန် - ကိုလိုနီခေတ်ဝတ္ထုတိုများ၏ခေတ်ကြေးမုံသိရှိစေရန် -	ကိုလိုနီခေတ် ဝတ္ထုတိုများမှာ လူ့ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်များကို ပုံဖော်ရေးသော ဝတ္ထုများဖြစ်ကြောင်း သိရှိစေရန် -	၁၉၃၀ ပြည့်နောက်ပိုင်း ဝတ္ထုများသည် အချစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအထိ နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်လာပုံကို သိရှိစေရန် -	လွတ်လပ်ရေးခေတ် ဝတ္ထုတိုများမှ ကြေးမုံရိပ်သွင်၊ စံပယ်ဉီး၊ ဘဝထိုထို ဝတ္ထုများကို ခြုံငုံလေ့လာ သိရှိစေရန် - လွတ်လပ်ရေးခေတ် ဝတ္ထုတိုများသည် လူ့သဘာဝကို ထင်ဟပ်လေ့ရှိကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက် အသားပေး ဝတ္ထုတိုများဖြစ်ကြောင်း သိရှိနားလည်စေရန် (ခ) ဝတ္ထုရှည်သင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် -	ကိုလိုနီခေတ် ဝတ္ထုရှည်တို့၏ သဘောသဘာဝနှင့် လွတ်လပ်ရေးခေတ် ဝတ္ထုရှည်တို့၏ သဘော သဘာဝကို ခြုံငုံလေ့လာတတ်စေရန် -	ကိုလိုနီခေတ် ဝတ္ထုရှည်များသည် ရာဇဝင်နောက်ခံဝတ္ထုရှည်များဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဝံသာနုရက္ခိတ တရားထွန်းကားအောင် လှုံ့ဆော်ပေးသောဝတ္ထုများဖြစ်ကြောင်းကို နတ်ရှင်နောင်ဝတ္ထု၊ မှာတော်ပုံ ဝတ္ထု၊ နားခံတော်ဝတ္ထုများနှင့် ချိန်ထိုးလေ့လာတတ်စေရန် -	လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဝတ္ထုတိုများမှ “သံနှင့်သွေး”၊ “အရှေ့ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာ”၊ “သီတာ သောင်ခြေဉီး”ဝတ္ထုများကိုလေ့လာပြီး ကိုလိုနီခေတ်ဝတ္ထုရှည်များနှင့်ကွဲပြားလာပုံကို ခွဲခြားတတ် စေရန် -	လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဝတ္ထုရှည်များသည် လူတန်းစားအမျိုးမျိုးတို့၏ဘဝအထွေထွေကို သရုပ်ဖော်မှု အားကောင်းလာကြောင်း သိမြင်တတ်စေရန် နန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီး နန်းတွင်းအဖြစ်အပျက်များကို အခြေခံ၍ နန်းတွင်း၌ပင် ဖတ်ရှုရန်နှင့် ခင်းကျင်းကပြရန်အတွက် ရည်ရွယ်ကာ ရှည်လျားခမ်းနားစွာ ရေးဖွဲ့ထားသော ရသမြောက်ဇာတ်တော်ကြီးများဖြစ်သည်။ နန်းတွင်းဇာတ် (၈)ခု ရှိသည်။ ညောင်ရမ်းခေတ်တွင် ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ မဏိကက်ပြဇာတ်သည် နန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီးများ၏ အစဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ရာမ၊ ဣန္ဒာဝုဓ (အီနောင်)ဉီးစရေး၊ သင်္ခပတ္တ (သတိုးဓမ္မရာဇာ)၊ ကေသာသီရိ (သခင်မင်းမိ)၊ သမုဒ္ဒဃောသ (ဉီးစ)၊ ဝိဇယကာရီ ဣန္ဒာဝံသ (လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်)တို့ ဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်တော်ကြီး (၈) ခုထဲမှ မဏိကက်ပြဇာတ်၊ ရာမနန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီးနှင့် ကေသာသီရိ ပြဇာတ် တို့ကို လေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်။ နန်းတွင်းဇာတ်များတွင် တွေ့နိုင်သည့် ယေဘုယျလက္ခဏာ များနှင့် ယှဉ်တွဲလေ့လာနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးပြဇာတ်အနေဖြင့် ဉီးကြင်ဉ၊ ဉီးပုညတို့၏ ပြဇာတ်များကို ပြဇာတ်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ လေ့လာ တင်ပြနိုင်ရပါမည်။
မ-၆၁၂ (စာ) သုတစကားပြေ
စာပေယဉ်ကျေးမှု အနုပညာဆိုင်ရာ ကျမ်းကြီးများ ၁။ လောကဗျူဟာ အင်ရုံစာတမ်း မြန်မာမင်းဆက် နန်းဓလေ့များကို မှတ်တမ်းရေးသားထားသော ကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းပြုသူမှာ မြန်မာမင်းဆက် (၃)ဆက်တိုင်တိုင် အမှုထမ်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ မင်းမှုထမ်းဘဝ မင်းစဉ်မင်းဆက်တို့၏ နန်းတွင်းအုပ်ချုပ်ပုံ စီမံခန့်ခွဲပုံကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ နန်းတွင်းမင်းရိုးမင်းဆက်တို့ ခမ်းနားထည်ဝါစွာနေထိုင်ပုံကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ခမ်းနား ထည်ဝါသော မင်းရိုးမင်းဆက်တို့၏ နေထိုင်ပြုမူပုံကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အိမ်ရှေ့မင်း ခန့်အပ်ပုံမှအစ အဆောင်အယောင် မင်းခမ်းမင်းနား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကိုပါ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ပွဲသဘင် အခမ်းအနားသာကိုသာမက ဘာသာရေး သာသနာရေးပွဲများပါမကျန် နန်းဓလေ့ အစီအရင် များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အတွဲ(၉)တွဲဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သမိုင်းမှတ်တိုင်အဖြစ် လည်း မှတ်သားနိုင်သကဲ့သို့ မြန်မာမင်းတို့၏ စေ့စပ်သေချာပုံ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခဲ့ပုံတို့ကိုလည်း သိမြင်နိုင်ပါသည်။ ၂။ ရွှေဘုံနိဒါန်း (၁၁၄၅) ခုနှစ် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် ဇေယျအသင်္ခယာ အမတ်ကြီးရေးသားခဲ့သော ရွှေဘုံနိဒါန်း သည် မင်းခမ်းမင်းနား အဆောင်အယောင်များနှင့် နေထိုင်စိုးစံခဲ့သည့် မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်တို့ အကြောင်းကို စုံလင်စွာ ဗဟုသုတတိုးစေနိုင်ပါသည်။ နန်းတော်ပြဿဒ် ပလ္လင်တော်များအကြောင်း၊ မြန်မာမင်းတို့ အသုံးပြုသွားလာကြပုံ မင်းခမ်းတော် များ၊ နေရာတော်များ၊ ဝင်စည်ထွက်စည်နှင့် အခြား မင်းမှုရေးရာများ၌ တီးမှုတ်ရသော စည်တူရိယာ များ၊ မင်းမှုထမ်းတို့ ရာထူးနေရာတာဝန် လုပ်ကိုင်ကြပုံ အဆင့်ဆင့်များနှင့် ပလ္လင်တော်အမျိုးအစားများ လှေစု၊ လှည်းစု၊ ဖောင်စု စသည့်သွားလာရာတွင် အသုံးပြုကြပုံများ ကုန်းဘောင်ခေတ်မင်းနှင့် ထီးနန်းဝန်းကျင် အဆောက်အဉီး အသုံးအဆောင်၊ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို သိမှတ်လေ့လာ သင်ယူရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၃။ လက်ဝဲနော်ရထာလျှောက်ထုံး (၁၁၂၀) ပြည့်နှစ်တွင် ရေးသားသော လျှောက်ထုံးဖြစ်သည်။ အလောင်းမင်းတရားလက်ထက်မှစ၍ ကုန်းဘောင်ခေတ် မင်း ၇ဆက်တိုင် အမတ်ကြီးအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ လက်ဝဲနော်ရထာဘွဲ့ရ ဉီးမြတ်သာနေမှ ရဟန်းခင်ကြီးဖျော်အား သိလိုသမျှ မေးလျှောက်သော အမေးအဖြေများဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထုံးတွင် နေလနက္ခတ်တာရာများ၊ မြင့်မိုရ်တောင်၊ စကြာဝဠာ၊ ကျွန်းလေးကျွန်း သာသနာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဓမ္မရေး၊ ရာဇရေး၊ စာပေကျမ်းဂန်လာ အဆိုအမိန့် အယူအဆများ၊ ကမ္ဘာ မြေကြီး ဖြစ်တည်ရာ သမိုင်းကြောင်းများ စသည်တို့ကို မေးမြန်းလျှောက်ထား၍ ဖြေကြားရာ၌လည်း လက်ခံနိုင်သည့် အကျိုးအကြောင်းကို ကျမ်းဂန်အဆိုအမိန့် ဘုရားဟောဓမ္မသတ်များနှင့် ချင့်ချိန်ကာ ဖြေဆိုထားပါသည်။ လောကုတ္တရာ အဖြာဖြာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများစွာ လေ့လာသင်ယူရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မ-၆၁၃ (စာ) ကဗျာ
ပထမနှစ် မဟာဝိဇ္ဇာတန်းတွင် မ-၆၁၃ မြန်မာကဗျာတွင် ရှေးကဗျာတွင် ပျို့၊ မော်ကွန်း၊ ဧချင်း၊ တောလား၊ ရကန်၊ သာချင်း၊ ဟောစာ တို့ကို သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ရှေးကဗျာတွင် အင်းဝခေတ်ပျို့များဖြစ်သော ရွှေဟင်္သာမင်းပျို့၊ နေမိဘုံခန်းပျို့၊ ဘူရိဒတ်ဇာတ်ပေါင်းပျို့၊ ဂါထာ ခြောက်ဆယ်ပျို့တို့ကိုလေ့လာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ အင်းဝခေတ်မော်ကွန်းတွင် တံတားဉီးတည် မင်္ဂလာစေတီ မော်ကွန်းများ၊ ရွှေနန်းတည်မော်ကွန်း၊ ရွှေစာတိုင်ဆင်တော်မော်ကွန်း တို့ကို လေ့လာသင်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ တောင်ငူခေတ် ဧချင်းတွင်လည်း မင်းတရားရွှေထီး ဧချင်းဟောင်း၊ ယိုးဒယားမိဖုရားဧချင်း မင်းရဲနရာဧချင်းနှင့် မင်းရဲကျော်စွာစုန်ဧချင်းများကို လေ့လာသင်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ အင်းဝခေတ်တောလားများဖြစ်သော ရှင်ဉတ္တမကျော်တောလားနှင့် ရွှေစက်တော်သွား တောလားများကို လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်စာပေဖြစ်သော နေမိရကန်၊ မင်းဆက် ရာဇဝင်သာချင်း ဉပကစာဝါဟောစာများကို လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ရှေးစာဆိုများရေးသား သော စာပေများကို လေ့လာရသည့်အတွက် စာဆိုများ၏ စာပေဗဟုသုတကျမ်းဂန် ကြွယ်ဝ သူများပီပီ အပြောက်အမွမ်း ကောင်းများနှင့် ရေးသားထားသည့် စာဆိုများ၏ ကဗျာဉာဏ်ရည်ကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စာဆိုများ၏ စာပေအဖွဲ့စွမ်းရည်ကြောင့် လောကသဘာဝ၊ လူ့သဘာဝကို သတိပြုမိလာစေပြီး ဘဝ အသိအမြင်များလည်း လေ့လာသိရှိနိုင်ပါမည်။
မ-၆၁၄ (စာ) ကျောက်စာစာပေ
(က) ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများ (ခ) ပင်းယခေတ်ကျောက်စာများ (ဃ) အင်းဝခေတ်ကျောက်စာများ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများမှ အလှူမှတ်တမ်းတင်ပုံနှင့် မြန်မာစာခေတ်ဉီး အရေးအသားမှတဆင့် ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ် မင်း၊ ပြည်သူတို့၏ အလှူအကြောင်းကို သိရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပင်းယခေတ်နှင့် အင်းဝခေတ်၏ သာသနာရေး လူမှုရေး အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေးစသော မှတ်သား လေ့လာဖွယ်ရာများ၊ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများ၊ ဝါကျဖွဲ့ထုံးများကို လေ့လာနိုင်ပေမည်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများသည် မြန်မာစာပေ၏ မြစ်ဖျားခံရာဖြစ်သော ကျောက်စာစာပေတို့မှ ရှေးမြန်မာတို့၏ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများကို သိမြင်နိုင်ပါသည်။ ပုဂံခေတ်မှ စတင်ခဲ့သည့် မြန်မာစာပေသည် ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်၌ တစ်စတစ်စဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပုံကို ကျောက်စာရှိ စာပေအရေးအသားများက အခိုင်အမာညွှန်ပြနေသည်ကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ -	ပုဂံခေတ်ဉီး မြန်မာကျောက်စာ၊ ပုဂံခေတ်လယ် မြန်မာကျောက်စာ၊ ပုဂံခေတ်နှောင်း မြန်မာ ကျောက်စာများကို လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့် ပုဂံခေတ်ဉီး၊ ပုဂံခေတ်လယ်၊ ပုဂံခေတ်နှောင်း သာသနာရေး ခံယူချက်များ မြင့်မားတိုးတက်လာပုံကို သိရှိနိုင်စေရန် -	ပုဂံခေတ်ဉီး၊ ပုဂံခေတ်လယ်၊ ပုဂံခေတ်နှောင်း မြန်မာစာပေ အရေးအသား အဆင့်အတန်း ထူးခြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပုံကို လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် -	ပုဂံခေတ်မြေယာနှင့်ပတ်သက်သော ရောင်းဝယ်လှူဒါန်းကြပုံ၊ ပုဂံခေတ် ကျွန်များလှူဒါန်းကြပုံ၊ စသော ပုဂံခေတ်၏ ကြေးမုံကို သိရှိပြီး မြန်မာစာပေ အစဉီး မြန်မာကျောက်စာများ၏ တန်ဖိုး ကြီးမားပုံကို သိရှိတန်ဖိုးထားတတ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ -	ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်ထိုး ကျောက်စာများသည် အလှူမှတ်တမ်းတင် ကျောက်စာဖြစ်၍ ဝါကျ ရှည်များကို အသုံးပြုလာကြသည်။ -	နာမဝိသေသန အသုံးများ၊ ဝါကျဆက်များ၊ လုံးချင်းကြိယာများ၊ လုံးတွဲကြိယာများဖြင့် ပိုင်နိုင်စွာ သုံးနှုန်းတတ်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ -	ပုဂံခေတ်ကျောက်စာ အစပြုခဲ့သော မြန်မာစာပေသည် ပင်းယ၊ အင်းဝသို့ ရောက်သောအခါ စာပေ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မ-၆၂၁ (စာ) ရသစကားပြေ (ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်၊ ပြဇာတ်)
ဝတ္ထုတိုသင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် -	လွတ်လပ်ရေးခေတ် (၁၉၆၂ မှ ယနေ့ထိ) ဝတ္ထုတိုများကို လေ့လာရာတွင် ဝတ္ထုတိုသဘောတရား၊ ဝတ္ထုတိုသမိုင်းကြောင်းတို့ကိုသိရှိနားလည်ပြီး လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဝတ္ထုတိုများနှင့် ချိန်ထိုးလေ့လာ တတ်စေရန် -	ဝတ္ထုတိုများအဖြစ် မင်းရှင်၏လမ်းပေါ်မှာ၊ ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း၏ ကိုဆေးရိုးဝတ္ထုတိုများ၊ မိုးမိုး(အင်းလျား)၏ ဝတ္ထုတိုများကို လေ့လာပြီး ဇာတ်လမ်းအသားပေး၊ ဇာတ်ဆောင်အသားပေး၊ ဉီးတည်ချက်ကောင်းသော ဝတ္ထုတိုများ စသဖြင့် ခွဲခြားလေ့လာတတ်စေရန် -	လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဝတ္ထုတိုများမှလောကကောင်းကျိုးပြုဝတ္ထုတိုများ၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စတို့၌ ပီပြင်အောင် ရေးသားတတ်သည့် အတတ်ပညာများကို နည်းယူတတ်စေရန် -	ဆင်းရဲသားလက်လုပ်လက်စားတို့၏ဘဝသရုပ်ကို ရိုးစင်းသောအဖြစ်အပျက်၊ရိုးစင်းသောရေးဟန်၊ မှန်ကန်သော အတင်အပြတို့ဖြင့် တင်ပြနိုင်ပုံတို့ကို အတုယူတတ်စေရန် ဝတ္ထုရှည်သင်ကြားရခြင်းရည်မှန်းချက် -	ဝတ္ထုရှည်သဘောတရားနှင့် ဝတ္ထုရှည်သမိုင်းကြောင်းကို သိရှိပြီး (၁၉၆၂ မှ ယနေ့ထိ) ဝတ္ထုရှည်များနှင့် ကိုလိုနီခေတ်ဝတ္ထု၊ ရှေးဝတ္ထုတို့နှင့် ကွဲပြားပုံကို သိရှိစေရန် -	၁၉၆၂ မှ ယနေ့ထိ ဝတ္ထုရှည်များမှ မစန္ဒာ၏ ဘဝအိပ်မက် ပန်းအိပ်မက်၊ တက္ကသိုလ်မြစိမ်း၏ နောက်တိုးဝတ္ထုရှည်၊ မြသန်းတင့်၏ ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်၊ ခင်နှင်းယု၏ မြကြာဖြူဝတ္ထုတို့ကို လေ့လာပြီး စာရေးဆရာကြီးများ၏ ဝတ္ထုရှည်ရေးဟန်၊ အတွေးအမြင် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပုံတို့ကို လေ့လာတတ်စေရန် -	၁၉၆၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဝတ္ထုများတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဝန်းကျင်တို့ကို နောက်ခံပြု၍ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ဆောင်တို့ကို ဖန်တီးတတ်ပုံကို သိရှိနားလည်စေရန် -	ကွဲပြားသော ရေးသားဟန် သရုပ်ဖော်မှု၊ နောက်ခံဝန်းကျင်ပံ့ပိုးမှု၊ စရိုက်သရုပ်ဖော်မှု၊ ရသပေးမှု တို့ကို အတုယူတတ်စေရန် နန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီး ညောင်ရမ်းခေတ်- မြန်မာပြဇာတ်သမိုင်းတွင် ရှေးဉီးမြန်မာပြဇာတ်ဟု ခေါ်ဆိုရသော “မဏိကက် နန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီး” သည် ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ ထူးခြားသော စာပေဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာသည် ပြဇာတ်စာပေခေတ်သစ်ကို ထူထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်- ရာမနန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီးကို နေမျိုးနာဋကကျော်ခေါင်က ရေးဖွဲ့သည်ဟု အမှတ်အသားရှိပါသည်။ ဟိန္ဒူရာမ၊ ပုံတော်ရာမ၊ ပသျှူးရာမ၊ ယိုးဒယားရာမနှင့် မြန်မာရာမဟူ၍ ၅ မျိုးရှိသည့်အနက် ရာမ ဇာတ်တော်ကြီးသည် မြန်မာရာမဇာတ်လမ်းကို အကျဉ်းချုံးတင်ပြထားသည်။ ကေသာသီရိ နန်းတွင်းဇာတ်ကို သခင်မင်းမိရေးသားသည်။ နန်းတွင်းဇာတ်များတွင် တွေ့ရသော အင်္ဂါရပ်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပြဇာတ်ကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဉီးကြင်ဉနှင့် ဉီးပုညတို့၏ ပြဇာတ်များသည် တစ်ညတည်းအပြီး ကပြနိုင်အောင် ဖန်တီးနိုင်သည်။ ပြဇာတ်စာပေ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။ စရိုက်သဘာဝကို ပေါ်လွင်အောင် တင်ပြနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ လှိုင်ထိပ်ခေါင်ထင်၏ ဝိဇယကာရီနှင့် ဣန္ဒာဝံသ နန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီးများသည် ပြဇာတ်စာပေ တစ်စောင်ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံမောင်ဝက ဣန္ဒာဝံသနန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီးလောက် လူတို့၏စိတ်ကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးထားသော နန်းတွင်းဇာတ် မတွေ့ရဘူးဟု ကောက်ချက်ချ ပေးခဲ့ ပါသည်။ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်များ၊ တန်ခိုးစွမ်းအားများကိုထည့်၍ ဇာတ်ချင်းများနှင့် ကာရန်ယူ ရေးဖွဲ့ ထားသည့် ပြဇာတ်များဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်ပြဇာတ်တွင် ကိုလိုနီခေတ်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ခေတ်သစ်ဆန်းပြီ၊ အာဇာနည်မိခင် (ဆရာမောင်ထင်)၏ ပြဇာတ်များကို လေ့လာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်ကို ထင်ဟပ်သော ဖြစ်ရပ်မှန်များ ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ရေးသားသော ပြဇာတ်များဖြစ်သည်။ ပြဇာတ် (နန်းတွင်းပြဇာတ်၊ ရှေးပြဇာတ်၊ ခေတ်သစ်ပြဇာတ်) တို့ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မ- ၆၂၂ သုတစကားပြေ
(က) စာပေသဘောတရား မြန်မာစာအထူးပြုကေျာင်းသူ၊ ကျောင်းသားများသည် Module no မ- ၆၂၂ သုတစကားပြေတွင် စာပေသဘောတရားနှင့် ကမ္ဘာ့စာပေသဘောတရားများကို လေ့လာသင်ကြား ရမည်ဖြစ်သည်။ (ခ) စာပေဝေဖန်ရေး စာပေသဘောတရားနှင့် ကမ္ဘာ့စာပေသဘောတရားတွင် စာပေဝေဖန်ရေး၊ ဝေဖန်ရေးဆရာနှင့် ဝေဖန်ရေးစံများ၊ စာပေဝေဖန်ရေး အမျိုးအစားများပါဝင်သည်။ ၂။ ဝေဖန်ရေးဆရာနှင့် ဝေဖန်ရေးစံ စာပေလေ့လာရာတွင် အဇ္ဈတ္တ(အတွင်း)လေ့လာမှုတွင် စာပေဖွဲ့စည်းပုံများကို အဆင့်ဆင့်လေ့လာ သိရှိရန်နှင့် ရေးဟန်၏ သဘောလက္ခဏာများ၊ အသံလေ့လာမှုတွင် ကာရန်၊ နရီ၊ စည်းဝါး၊ အလင်္ကာ၊ သင်္ကေတ၊ နိမိတ်ပုံများကို လေ့လာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ဗဟိဒ္ဓ(ပြင်ပ)လေ့လာမှုတွင် စာပေနှင့် စာဆိုဘဝ၊ စာပေနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို သုတစကားပြေအနေဖြင့် လေ့လာသင်ယူကြရမည်ဖြစ် သည်။ ၃။ စာပေဝေဖန်ရေးနှင့် အမျိုးအစားများ စာပေအနုပညာ၏ အကြောင်းအရာသည် လွန်စွာကျယ်ဝန်းများပြားရှုတ်ထွေးသိမ်မွေ့ပါသည်။ စာရေးဆရာ အနုပညာသမားသည် သူ့တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော ခံစားမှုကို ထုတ်ဖော်ရန်အတွက် ဖန်တီးရေးသားသော စာကို စာပေအနုပညာပစ္စည်းဟုခေါ်သည်။ ၄။ အဇ္ဈတ္တ(အတွင်း)လေ့လာမှု •	စာပေသဘောတရားကို သီဝရီဟုခေါ်သည်။ (တရားကိုယ်သဘော)ဟုလည်း သုံးနှိုင်းပုံ •	စာပေအနုပညာပစ္စည်းတစ်ရပ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရာတွင် အကောင်းအညံ့ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းသည် စာပေဝေဖန်ရေးသော့ချက်ဖြစ်ပုံ •	ဝေဖန်ရေးအမျိုးအစားများ ကွဲပြားလျက်ရှိကြောင်း သတိပြုစေရန် •	ဘာသာစကားနှင့် စာပေရေးသားမှုကို ဆက်စပ်လေ့လာသောရေးဟန်ပညာအကြောင်း သိရှိစေရန် •	ဘာသာစကားသည် စကားသံများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် စကားသံများကိုလေ့လာရန် •	ဘာသာစကားသည် စကားသံများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် စကားသံများကိုလေ့လာရန် •	နရီ(စည်းဝါး)ကို စကားပြေ၏ ကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် လေ့လာရန် ၅။ ဗဟိဒ္ဓ(ပြင်ပ)လေ့လာမှု ဗဟိဒ္ဓ (ပြင်ပ) လေ့လာမှုတွင် စာပေနှင့်စာဆိုဘဝ၊ စာပေနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို သုတစာပေများ လေ့လာရာတွင် စာရေးသူ၏ ဖော်ပြလိုချက်၊ သူ၏ဖန်တီးမှု၊ သူ၏အနုပညာမြောက်မှု များကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါမည်။ စာပေသဘောတရား(သီဝရီ)မှတစ်ဆင့် စာပေဝေဖန်ရေး၊ စာပေ ရေးဟန်များနှင့် ဘာသာစကားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် စကားသံများကိုပါ ထည့်သွင်းလေ့လာနိုင် ပေမည်။
မ- ၆၂၃ (စာ) ကဗျာ
မန္တလေးခေတ်ကဗျာများ ကိုလိုနီခေတ်ကဗျာများ လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကဗျာများ (က) ခေတ်ကဗျာကဏ္ဍ (ခ) ကဗျာရေးဖွဲ့ဟန်များ လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကဗျာများ •	မြန်မာစာပေကို လေ့လာကြည့်လျှင် စကားပြေနှင့် ကဗျာဟူ၍ ပုံသဏ္ဌာန်နှစ်ရပ် တွေ့ပါလိမ့်မည်။ မ- ၆၂၃ (စာ) ကဗျာ သင်ရိုးတွင် ကဗျာပိုင်းကို လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးခေတ် ကဗျာများနှင့် လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကဗျာများဟူ၍ ခေတ်ပိုင်းခြားလေ့လာရမည် ဖြစ်ပါသည်။ •	မန္တလေးခေတ်ကဗျာများတွင် ဉီးပုညနှင့် အချုပ်တန်း ဆရာဖေတို့၏ တေးထပ်များကို လေ့လာရ မည်။ •	လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကဗျာများ (၁၉၄၈- ၁၉၆၁) အတွင်း ထင်ရှားသော စာရေးဆရာများ၏ ကဗျာ များ ကို လေ့လာရမည်။ •	ဆရာဇော်ဂျီ၊ မင်းသုဝဏ်၊ ဒဂုန်တာရာ၊ နုယဉ်၊ ငွေတာရီ၊ ကြည်အေး၊ မင်းယုဝေ၊ ထွန်းနေနွယ်၊ ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ထီလာစစ်သူ၊ နေသွေးနီ၊ တက္ကသိုလ်မင်းမော်၊ ဝင်းကြွယ်တို့၏ ကဗျာများကို လေ့လာ ရမည်။ •	ထိုကဗျာများထဲမှ ဇာတ်လမ်းကဗျာများ ကဗျာရေးဖွဲ့ဟန်များကိုလည်း အထူးပြုလေ့လာရမည် ဖြစ်သည်။
မ-၆၂၄ (စာ) စာပေရေးဟန် (Literary Stylistise)
ရေးဟန် သင်ကြားရခြင်းရည်ရွယ်ချက် -	ဘာသာစကားနှင့် စာပေရေးသားမှုကို ဆက်စပ်လေ့လာရသော ရေးဟန်ပညာအကြောင်း သိစေရန် -	‘ဟန်’သည် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပုံ၊ ပြောဟန်နှင့် ရေးဟန်များကို ပညာရှင်အသီးသီးက စနစ်တကျ သုတေသနပြုခဲ့ကြပုံကို သိရှိစေရန် -	‘ဟန်’ကို သွင်ပြင်၊ အမူအရာဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို၍ တစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီးလည်း ဟန်သွင်ပြင်ကွဲပြားမှု များ ရှိပုံ၊ စာပေရေးသားရာ၌လည်း ရေးဟန်များကွဲပြားနိုင်ကြောင်းကို သိရှိစေပါသည်။ -	မြန်မာဘာသာစကားတွင် ပြောဟန်နှင့် ရေးဟန်ပတ်သက်သည့် စူးစမ်းစရာများ များစွာရှိကြောင်း လည်း သိစေနိုင်ပါသည်။ -	စာပေရေးဟန်များတွင် အလင်္ကာ၊ နရီ(စည်းဝါး)၊ လေသံတို့သည်လည်း အရေးပါကြောင်း သိရှိစေ ပါသည်။ -	စာရေးသူ၏ ခံစားမှု၊ အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင်ကို အခြေပြု၌ ပုံဖော်ပုံ၊ စာရေးသူ၏ စိတ်အမူ အရာသည် ရေးဟန်ဖြစ်ပုံတို့ကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ -	စာရေးသူက စာဖတ်သူအပေါ်ထားရှိသည့် သဘောထားကိုလည်း သူ၏ ‘ဟန်’ ကဖော်ပြနေပုံ၊ စာရေးသူ၏ စေတနာသွင်ပြင်ကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ -	မြန်မာစာပေ လေ့လာမှုတွင် စာပေရေးဟန်သည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ၌ တည်ရှိနေကြောင်း ကို သိစေလိုပါသည်။
DR. KHIN KHIN THEIN
DR. TIN TIN HMUN
Dr. Kay Thi Khaing
Dr. San Ohnmar
Dr. Swe Swe Than
Dr. Lwin Lwin Maw
Daw Aye Aye Win
Daw Myint Myint Tin
Daw Myint Myint Thein
Daw Myint Myint Maw
Daw Naing Naing Maw
Daw Sandar Lwin
Daw Myint Myint San
U Aung Khin Sints
Daw Thida Win
Daw Tin Zar Zar Min
Daw Thin Thin Htwe
Daw Zin Mar Thet
Dr. Htet Htet Linn
Daw Myint Myint Than
Daw Zin Myo Thu
Collecting technical information, doing researches, distributing information, applying and reviewing for the society
Producing intellectually wise, discerning and responsible human resources
Bago University’s main goal is to produce highly qualified, competent, undergraduate human resources for the purpose of buildingamodern, developed nation.
Yangon-Mandalay Highway Road, (8/9) ward, Oakthar Myothit, Bago, Bago Region, Myanmar.
Tel: (+95) 052 2230288
00225 2
© Copyright 2020 Bago University. All Rights Reserved. Developed by Nanolabs.